ဘယ်လိုဝယ်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပျူပျူငှာငှာ ဆက်ဆံတတ်တာကြောင့် ချီးကျူးခံနေရတဲ့ အရောင်းဝန်ထမ်းမလေး – Shwe Yaung Lan
[ October 22, 2021 ] အရေပြားအောက်မှာ ရှင်သန်နေ ကြီးထွားနေတဲ့ သံကောင်	Uncategorized
[ October 21, 2021 ] အကြွေးနွံထဲက မြန်မြန် ရုန်းထွက်စေနိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၇) သွယ်	News
[ October 21, 2021 ] သင့်ကို ခေါင်းခြောက်ပြီး ဆွံ့အသွားစေမယ့် အထူးဆန်းဆုံး ပုံ( ၁၅) ပုံ	SYL Amazing Photos
[ October 21, 2021 ] သူယောင်မယ် ၊ သူယောင်သီး အမှန်တကယ် ရှိသလား?	News
[ October 21, 2021 ] ကျနော်တို့ရဲ့ ခန္ဒာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို အဆ ၁၀၀၀ ကျော် zoom ဆွဲလိုက်တဲ့အခါ	SYL Amazing Photos
HomeKnowledgeဘယ်လိုဝယ်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပျူပျူငှာငှာ ဆက်ဆံတတ်တာကြောင့် ချီးကျူးခံနေရတဲ့ အရောင်းဝန်ထမ်းမလေး
ဘယ်လိုဝယ်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပျူပျူငှာငှာ ဆက်ဆံတတ်တာကြောင့် ချီးကျူးခံနေရတဲ့ အရောင်းဝန်ထမ်းမလေး
August 17, 2021 Admin Knowledge 0
လူတစ်ယောက်ကိုရုပ်ရည်အသွင်အပြင်ကိုကြည့်ပြီး အကဲခတ်ကာ ခွဲခြားဆက်ဆံတတ်ခြင်းဟာ လူတော်တော်များများရဲ့သဘာဝလိုဖြစ်နေပါတယ်။
အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ စုတ်ပြတ်နေတဲ့အဝတ်အစားတွေနဲ့ ဖုန်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲဝင်သွားတဲ့အခါ သူ့ရဲ့ညစ်ပေနေတဲ့ပုံစံကြောင့် ထိုဆိုင်ကနေ ဝန်ဆောင်မှုမပေးချင်ခဲ့ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ OPPO ဖုန်းဆိုင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ထိုဆိုင်က အရောင်းဝန်ထမ်းလေးတစ်ဦးက အဝတ်အစားတွေညစ်ပတ်နံစော်နေတဲ့ ထိုအမျိုးသားကို ကာစတန်မာတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပျူပျူငှာငှာဆက်ဆံခဲ့ပြီး သူလိုချင်တဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစားကို ထုတ်ပြကာ ချိုချိုသာသာနဲ့ရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။
Pinky လို့အမည်ရတဲ့ ထိုအရောင်းဝန်ထမ်းလေးကျေးဇူးနဲ့ ဘယ်သူကမှ ဝန်ဆောင်မှုမပေးချင်တဲ့ အမျိုးသားဟာ သူလိုချင်တဲ့ ဒေါ်လာ ၁၃၅ တန်ဖိုးရှိတဲ့ OPPO A47 ဖုန်းကို ဝယ်ယူခွင့်ရသွားခဲ့တဲ့အပြင် သူမဟာ ဖုန်းရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အသုံးပြုတွေကိုပါ အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒီသတင်းကို Visayan ဆိုတဲ့ဖေ့ဘွက်အကောင့်တစ်ခုတင်ထားခဲ့ပြီး အင်တာနက်သုံးစွဲသူတိုင်းကလည်း ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးဘဲ ချိုသာစွာဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့တဲ့ အရောင်းဝန်ထမ်းမလေး Pinky ကို ချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။
ဝတ်ပုံစားပုံစုတ်ချာနေပေမယ့် ထိုအမျိုးသားကတော့ သူ့မှာဖုန်းရဲ့ကျသင့်ငွေထက်ပိုများတဲ့ငွေကြေးပါလာကြောင်း ဆိုခဲ့ပြီး ကာစတန်မာကိုအပြင်ပုံပန်းသဏ္ဍာန်မကြည့်ဘဲ တန်းတူဆက်ဆံတဲ့အရောင်းစာရေးမလေးကတော့ စံပြုစရာအရောင်းဝန်ထမ်းအဖြစ် လူအများရဲ့ချီးမွန်းခြင်းကိုခံနေရပါတယ်။
Shwe Yaung Myanmar ( Writer – Lwinlwin Aung )
ဖခင်ဆုံးပါးပြီး နောက်ပိုင်းမှာ အိမ်ကထွက်သွားတဲ့ အမေ့ကို နေ့တိုင်း မျှော်နေကြတဲ့ ညီအမ နှစ်ဦး
ပွေ့ဖက်တဲ့အခါ ရရှိလာမယ့် ကျန်းမာရေး ကောင်းကျိုး (၇) ချက်
အရေပြားအောက်မှာ ရှင်သန်နေ ကြီးထွားနေတဲ့ သံကောင်
အကြွေးနွံထဲက မြန်မြန် ရုန်းထွက်စေနိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၇) သွယ်
သင့်ကို ခေါင်းခြောက်ပြီး ဆွံ့အသွားစေမယ့် အထူးဆန်းဆုံး ပုံ( ၁၅) ပုံ
သူယောင်မယ် ၊ သူယောင်သီး အမှန်တကယ် ရှိသလား?
ကျနော်တို့ရဲ့ ခန္ဒာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို အဆ ၁၀၀၀ ကျော် zoom ဆွဲလိုက်တဲ့အခါ